▷ Eyona NANO AQUARIUMS enobungakanani obuncitshisiweyo: ukubonelela kunye nesikhokelo | Ngeentlanzi
Kwilizwe le-aquariums kukho iintlobo ezininzi ze-aquariums ezilungelelanisa zonke iintlobo zeemfuno kunye neentlobo. Enye yazo yi nano aquarium. Njengoko igama layo libonisa, yindawo encinci enamanzi eneempawu ezizodwa.
Kweli nqaku siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga ne-nano aquariums, iimpawu zazo kunye nokuba zeziphi ezona zilungileyo ngokusekwe kwixabiso kunye nomgangatho wazo.
1 Ezona nari aquariums zibalaseleyo
2 Yintoni i-nano aquarium
3 Yeyiphi intlanzi yokubeka kwi-nano aquarium
4 I-nano aquarium ye-betta
5 Zeziphi izityalo oza kuzisebenzisa kwi-nano aquarium
6 Ngaba unokucoca ulwelo lwangaphandle kwindawo ye-nano aquarium?
7 Imilinganiselo ye-nano aquarium
8 Olona hlobo lwe nano aquarium lubalaseleyo
9 Kuphi ukuthenga i-nano aquarium enexabiso eliphantsi
Ezona nari aquariums zibalaseleyo
Ulwandle Simahla AT641A Nano ...
biOrb UBOMI 15 LED...
iglasi yasemanzini eyi-hygger ...
Yintoni i-nano aquarium
Amanzi amancinci amancinci, i-nano aquariums okanye i-mini aquariums zezona ndlela zilungileyo zokungena kwihlabathi lamanzi. Ubungakanani babo babenza ukuba babe yindawo efanelekileyo ye-aquarium yabaqalayo, kodwa zikwindlela efanelekileyo yokufumana ii-hobbyists ezinamava ezifuna ukubeka i-aquarium encinci kwenye indawo, kwaye azikwazi ngenxa yezizathu zesithuba. Enye yeenzuzo ezinkulu zee-nano aquariums kukuba inokufakwa nakweyiphi na ikona yendlu, nokuba ligumbi lokulala, ibhokisi okanye idesika.
Kunzima ukucebisa i-aquarium, kuba akwaziwa ukuba uza kuyisebenzisa njani, ufuna ziphi iintlanzi, ukuba ufuna ukubeka izityalo, uhombise ngezityalo zendalo okanye ezingezizo, njl. Into enokuthethwa ngokuqiniseka ngokupheleleyo kukuba zincinci kakhulu, ilungele ukuhoya iintlanzi ezincinci kunye nokuzisa isiqwenga sendalo ekhaya. Unonophelo lwentlanzi kunye nokujongwa kwayo kuzolile kwaye kulula ukuyenza.
Yeyiphi intlanzi yokubeka kwi-nano aquarium
UBetta Splendens: Nge-nano aquarium ene umthamo weelitha ezingama-30, i-betta inokuphila ngokugqibeleleyo. Le ntlanzi ifuna i-aquarium enezityalo ezaneleyo kunye nendawo yokufihla kuba kulapho ilala khona. Kananjalo bakhetha amanzi azolileyo, ke kungcono xa imisinga ingabonakali. Kuyacetyiswa ukuba kugcinwe kuphela intlanzi yolu hlobo kuba bahlala bexinekile.
UDario Dario: Yintlanzi encinci eyinzalelwane yaseIndiya. Ubude bayo bu-3 cm, olulungele ii-nano aquariums. Amadoda anethoni ebomvu neblue, ngelixa amabhinqa engwevu. Kananjalo, azisebenzi kakhulu, Oko kukuthi, abakuthandi ngokukodwa ukudada. Inqaku elilunge kakhulu elenza ukuba ibe yintlanzi efanelekileyo yolwandle olunamanzi amancinci. I-Dario Dario inokugcinwa kubushushu begumbi kwaye itye ukutya okuncinci okuphilayo.
Intlanzi encinci yePuffer: Intlanzi encinci yentlanzi yenye yeentlanzi ezinokuhlala ngokugqibeleleyo kwii-nano aquariums. Yintlanzi epheleleyo yentlanzi yamanzi. Ubungakanani bayo bu malunga ne-3 cm. Ayifuni kutya ityuwa kwaye ukutya kwayo kusekwe kwiminenke okanye okunye ukutya okunefriji kunye nomkhenkce, okufana neepranini.
UKilli Clown: Yintlanzi evela eAfrika enokukhula ibe malunga ne-4 cm. Batsala amehlo kakhulu ngenxa yendlela emnyama emnyama nemhlophe. Zintlanzi ezikufutshane nomphezulu wamanzi kwaye zihlala zitsibela. Ke ngoko, kungcono ukuba nezityalo ezidadayo. Olu hlobo lukwafuna nesithuba sokuqubha, ke indawo ende ye-nano aquarium ilungile.
I-nano aquarium ye-betta
Los Iintlanzi ze-betta zihlala zithengiswa kwiivenkile zezilwanyana kwaye ungazisebenzisa i-nano aquarium yazo. Nangona kunjalo, bafuna indawo eyaneleyo yokuqubha. Nangona baya kuthanda i-aquarium enkulu, ngamanye amaxesha indawo yethu inomda kangangokuba i-aquarium encinci inokwenza iqhinga. Umgaqo oqhelekileyo wesithupha kukuba mkhulu ngakumbi (ngakumbi ukuba uceba ukukhulisa iintlanzi ezininzi).
Iintlanzi zeBetta zithanda ukuzilolonga kwaye iitanki ezinkulu ziyabavumela ukuba benze njalo. Ukusebenza akulunganga kuphela kwimpilo yakho, kodwa itanki enkulu ithetha ukuba ubulunga bamanzi bungcono, kuba itanki encinci iyakungcola ngokukhawuleza izalise nezinye izinto ezingcolisayo. Ingcono kufuneka ibe ziilitha ezi-2 ubuncinci.
Zininzi ii-nano aquariums kwintengiso, ezinokuthi zilungelelaniswe ngokugqibeleleyo nemeko yekhaya. Xa indawo ingavumeli indawo ye-aquarium engaphezulu kweelitha ezili-100, i-aquarium encinci inokuphinda iphindaphinde umhlaba omangalisayo wentlanzi yethu. Ke ngoko, kubalulekile ukwazi kakuhle ukuba ungayikhetha njani i-nano aquarium apho siza kubeka khona iintlanzi zethu ze-betta. Kuya kufuneka izise isihluzo sangaphakathi sebenza njengeoksijini, ukukhanya kokusebenzisa okuphantsi kunye nomthamo wokuhambisa ngaphezulu kweelitha ze-100 ngeyure.
Zeziphi izityalo oza kuzisebenzisa kwi-nano aquarium
Nantsi inkcazo encinci yezityalo zasemanzini ezikulungeleyo ukuya kwi-nano aquarium:
Ubusuku beKrisimesi: Le moss inamagqabi amade amile njengamasebe amancinci eKrisimesi. Iqiniswe kwimiphezulu enjengokhuni kunye neliwa. Ngokukhanya okwaneleyo iya kuba yifom yokukhula ehambelanayo, ngamanye amaxesha ngamasebe axhoma kancinci.
URiccardia chamedryfolia: Amagqabi ale moss afana neekorale mncinci kakhulu, okwenza ukuba ifaneleke kakhulu kwi-nano aquariums. Ubulembu bukhula emithini okanye elityeni ukwenza umqamelo ojikelezayo. I-Coral moss ikhula kancinci, kodwa ifuna ukukhanya ngakumbi kunye nezondlo kunamanye ubulembu, kunye nesixa esikhulu sekhabhon dayoksayidi yokukhula okunempilo.
IHemianthus callitrichoides "Cuba": Esi sesinye sezona zityalo zincinci zigqume umhlaba we-aquarium. Isityalo esintsonkothileyo esinamagqabi aluhlaza, aluhlaza akhula ngokukhawuleza. Ukuba kukho ukukhanya okwaneleyo kunye nezondlo kwikholamu yamanzi, iCuba iya kuvelisa amaqamza eoksijini abonakalayo phakathi kwamagqabi ayo.
IFissidens fontanusEyaziwa nangokuthi yi-phoenix moss, luhlobo oluhle lwe-moss. Amagqabi ayo athambileyo amancinci kwaye anentsiba. Le moss yenza umqamelo ojikelezayo onokuthi uqhotyoshelwe kwizihombiso kunye nemiyalezo engaphantsi.
Imicrosofthemum micranthemoides: Sisityalo sesiqu, kwaye ngenxa yamagqabi aso amancinci, silunge kakhulu kwi-nano aquariums. Yenza i-clumps eshinyeneyo kwaye inokusetyenziswa embindini okanye ngasemva kwi-aquarium. Ifuna inkqubo yokufaka isichumiso epheleleyo, equlethe ii-macronutrients kunye ne-micronutrients kunye ne-carbon dioxide, ukuze esi sityalo sikhule ngokukhawuleza nangempilo.
Eleocharis sp.. "Mini": Isityalo esigqwesileyo ngohlobo lwengca. Isityalo sisasazeka ngee-stolon ngenqanaba eliphakathi. Iziqu ezibhityileyo ziluhlaza ocacileyo. Ukuphakama kokukhula kungaphantsi kolunye uhlobo lwe-Eleocharis. Kungenxa yoko le nto esi sityalo silungele ii-aquariums ezincinci.
I-Cryptocoryne parva: Olu luhlobo oluncinci kakhulu lweCryptocoryne. Amagqabi aluhlaza esi sityalo lanceolate kancinci. Njengazo zonke ezinye i-Cryptocoryne, esi sityalo asikhethi, kodwa ukukhanya okwaneleyo, i-substrate etyebileyo yezondlo iya kuyenza ikhule ngcono. Ifanelekile kakhulu embindini nakwiphambili ye-nano aquariums.
IBucephalandra spKwiminyaka yakutshanje, iintlobo ezahlukeneyo zeBucephalandra ziye zavela ngakumbi kwizinto zokuzonwabisa. Ezi epiphyte ezikhula kancinci azifuni kwaye zincinci ngobukhulu. Imilo eyahlukeneyo kunye nemibala yamagqabi izenza izityalo ezifanelekileyo zokuvunwa. Zingasetyenziselwa ukongeza uhlaza oluncinci ematyeni okanye emithini.
Ngaba unokucoca ulwelo lwangaphandle kwindawo ye-nano aquarium?
Ewe, isihluzo sangaphandle sinokufakwa kwi-nano aquarium. Kukho izihluzo ezinesakhono soku ubenakho ukucoca amanzi kwii-aquariums ezinomthamo omalunga ne-30L. Logama isihluzo siluncedo kumthamo wamanzi ongaphantsi kwe-100 L ungaphezulu kokwaneleyo.
Imilinganiselo ye-nano aquarium
Kwinqanaba le-nano sifumana ubungakanani obahlukeneyo ukusuka kwi-7 yeelitha ukuya kwi-30 yeelitha kumthamo wamanzi. Kukho iimodeli ezinemilinganiselo ephakathi kwaye uninzi lwazo lunesihluzo sangaphakathi.
Izibane zikhethwa ngokuzithandela. Uninzi lwazo zihlala zinemilinganiselo iyahluka phakathi kweesentimitha ezingama-25-35 ubude, iisentimitha eziyi-15-35 ubunzulu kunye neesentimitha ezingama-20-40 ukuphakama.
Olona hlobo lwe nano aquarium lubalaseleyo
Zininzi izinto ezinobuchule ngokubhekisele kwi-nano aquariums, nangona ezona zibalaseleyo zezi zilandelayo:
I-Marine Aquarium epholileyo yegolide: Zizi-aquariums ezinesakhono esincinci kodwa ziyasebenza ukunyanga iintlanzi zamanzi abandayo. Bavame ukuba nolondolozo olusezantsi kunye nokuhlala ixesha elide.
Isidima se-Aquarius: Ndandiye kuye ndaziwa kakhulu kwihlabathi lezinto ezithandwa yi-aquarium. Zihlala ziyi-aquarium, iyamelana kwaye yenziwe ngezinto ezisemgangathweni. Ziyabonakala ngokuba zezona zahlukileyo kwaye zigqibelele kwaye zihlala zinemodeli enemibala emininzi ekhoyo. Izibane ezikhanyisiweyo zihlala zifumaneka kwiimodeli zazo, oko kuthetha ukonga umbane.
I-Aquarium Deluxe: le yenye yeempawu ezaziwayo kweli lizwe. Bahlala benoyilo loqobo kwaye beza neefilitha ezifakiweyo. Izibane zinemibala eyahlukeneyo kuxhomekeke ekukhanyeni ngaphandle. Ihlala iyenye yeendlela ezilungileyo onokuzithenga kwihlabathi lee-nano aquariums.
Kuphi ukuthenga i-nano aquarium enexabiso eliphantsi
Ukufumana la matanki entlanzi asemgangathweni kunokuba nzima ngakumbi. Nangona kunjalo, siza kukunika uluhlu lweendawo apho unokufumana indawo encinci ye-nano aquarium:
Amazon: Apha unokufumana uluhlu olubanzi lweemveliso ezisemgangathweni kunye nexabiso elifanelekileyo. Zonke iimodeli ziza nesiqinisekiso kwaye zikhawuleza kakhulu ukuhambisa.
kiwiko: yenye yeevenkile ezikhethekileyo kwizilwanyana zasekhaya nakwizilwanyana zasekhaya. Kukho iivenkile ezibonakalayo nezikwi-intanethi zokuthenga i-nano aquarium yakho.
I-Verdecora: Nangona ivenkile ekhethekileyo kwizityalo, zikwathengisa ii-aquariums kunye neentlanzi. Kule venkile unokufumana ezona zityalo zilungileyo kwi-nano-aquarium yakho ngokuqinisekileyo ngokuqinisekileyo ukuba ziya kuba zezona zicetyiswayo. Bahlala benamaxabiso amahle kwaye kukho zombini ivenkile ebonakalayo kunye nevenkile ebonakalayo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga ne-nano aquariums, iimpawu zazo kwaye zeziphi ezilungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Nano akwariyam